C/wali Gaas oo ka duceeyey fagaare isku bax Roob Doon ah ay kasoo qeyb galeen kumanaan qof oo ka dhacay Garoowe Daawo Sawirro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR C/wali Gaas oo ka duceeyey fagaare isku bax Roob Doon ah ay kasoo qeyb galeen kumanaan qof oo ka dhacay Garoowe Daawo Sawirro!!
C/wali Gaas oo ka duceeyey fagaare isku bax Roob Doon ah ay kasoo qeyb galeen kumanaan qof oo ka dhacay Garoowe Daawo Sawirro!!
Nov 21, 2016WARAR
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed ayaa ka qayb galay isu soo bax roob-doon oo ka dhacay duleedka magaalada Garoowe.
Gaas iyo bulshada Garoowe ayaa waxay duleedka Garoowe ku tukadeen Salaadda roob doon, iyaadoo Madaxweynuhu uu ILAAHAY Subxaanahu Watacaalaa ka beryay inuu umaddiisa ka dul qaado abaarta iyo colaadda , isla markaana uu caafimaad siiyo inta xanuusan sidoo kalena uu Allaah ugu deeqo roob khayr qaba oo dadka iyo duunyada wax yeelin.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Puntland oo khudbad ka jeediyay isu soo baxa roob doonka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay dhamaan umadda muslimka ah ay ILAAHAY u noqdaan isla markaana ay ka tanaasulaan wax kasta oo looga fogaan karo wanaagga iyo khayrka, Sidoo kale Madaxweynaha ayaa ugu duceeyey dhamaan bulshada in ILAAHAY uu ka dul qaado abaarta iyo colaadaha isla markaana uu roob khayra qaba ugu bedelo dhibaatada haysata hada.
”Waxaan isugu nimid roob doon iyo ILAAHAY inaan barino , waxaana loo baahan yahay inaan ILAAHAY unoqono, inaan is cafino, inaanu towbad keeno, inta nugul ee jilicsan ee dhibaatadu haysato aan u naxariisano oo aan ugu gargaarno wixii aan awoodno si deg deg ah, ILAAHAY waxaan ka baryaynaa inuu na cafiyo, ilaahayoow khatumada ha inoo suubbiyo, ilaahow beddel khayr qaba ayaanu kaa barinay, ilaahow nasii roob khayr qaba oo aan dhibaato noo geysan, ilahow abaarta iyo colaadda naga saar” ayuu yiri Madaxweynaha maamulka Puntland.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa umadda Puntland u rajeeyey in ILAAHAY uu ka saaro abaaraha iyo colaadaha isla markaana uu ugu bedelo barwaaqo iyo bash bash.
Previous PostDaawo: Siyaasiyiinta maamulka S.land ee Muqdisho ku sugan oo dagaal ka dhex Bilowday iyo Haweenay ka Warbixisay Dowlada qaybta Shabaabka ah!! Next PostGuddoomiyaha degmada Waaberi oo kashiftay sirta ka dambeysa xil ka qaadista lagu sameeyey iyo qaladaadka Dowlada Xasan sheeq oo ahaa Qof Xil maloo dhiibi karo mana laga qaadi karo!!